“Ofirraa ittisaa turre; amma afaan jarri beekaniin dubbisuun dirqii ta’e,”Jaal Marroo Dirribaa – Oromedia
Home » Oduu » “Ofirraa ittisaa turre; amma afaan jarri beekaniin dubbisuun dirqii ta’e,”Jaal Marroo Dirribaa
“… Wanti Finfinnee, gara eessaa, gara giddu gala jedhamee adeemaa jiru Oromootu of xiqqeesse. Tigiraay keessa har’a yoo ilaalte dhaloonni isaanii Taankii gurguddaa daangaarra kaahee ofirraa deebisaa. Rasaasi itti dhuka’uu mitii namni kaballaanuu hinrukutamu. Amaara keessatti har’aa Qawwee qabatanii hiriira bahanii, Qawwee hiikkadhaa mitii Qawwee maaliif qabattanii hiriira baatani namni jedhuun hinjiru. Oromiyaa keessatti garuu; sabni Oromoo kaleessa Qawwee dhabaafi garbummaa jalatti kufe. Har’allee akkanni Qawwee hinqabanne isanni qabatee jiruyyuu irraa hiikuu irratti xiyyeeffatu…”Jaal Marroo Dirribaa, Ajajaa WBO Zoonii Lixaa.
Gaazixeessaa: Hedduu fayyaa ta’i egaa Jaal Marroo yeroo muddaa kanatti yaada nuu laachuukeetiif maqaa dhaggeeffattootaa fii hordoftoota keenyaatiinii.
Previous: Hofkaltii Gadaa Ijoollee
Next: LABSA WARAANA BILISUMMAA OROMOO